ဘယ်လိုမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကိုဖြတ်ပြီးညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုဘာသာရေးတက်ရောက်သူပုံသဏ္ဍာန်ဘယ်နေရာတွေမှာသနည်း (2016) - Porn တွင်သင့်ဦးနှောက်
J ကိုမြီးကောင်ပေါက်။ 2016 ဇွန်; 49: 191-203 ။ Doi: 10.1016 / j.adolescence.2016.03.017
Rasmussen K သည်1, အဲလက်စ် Bierman2.
သုတေသန ပို. ပို. မြီးကောင်ပေါက်အကြားညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုထိခိုက်အကျိုးဆက်များများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေဖို့အာရုံကိုခေါ်ဆိုသည်။ သို့သော်အနည်းငယ်လေ့လာမှုများညစ်ညမ်းစားသုံးမှုအပေါ်ဘာသာရေးတက်ရောက်သူ၏စိစစ်သက်ရောက်မှုတစ်ခုထူထောင်သီအိုရီအခြေခံပေမယ့်ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုပုံဖော်အတွက်ဘာသာတရား၏အခန်းကဏ္ဍကိုဆန်းစစ် longitudinal သို့မဟုတ်တသမတ်တည်းဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုညစ်ညမ်းစားသုံးမှုဆန်းစစ်။ ငယ်ရွယ်လူကြီးသို့မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ထဲကနေဖြေဆိုသူအောက်ပါအတိုင်းတဲ့အမျိုးသားရေး longitudinal စစ်တမ်းကိုသုံးပြီးကျနော်တို့ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအထူးသဖြင့်ယောက်ျားလေးများကြားတွင်, အသက်တွေနဲ့သိသိသာသာတိုးပွါးကြောင်းပြသပါ။ ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုအထူးသဖြင့်ယောက်ျားလေးများကြားတွင်, ဘာသာရေးတက်ရောက်သူ၏အဆင့်မြင့်မှာအားနည်းသည်နှင့်ဘာသာရေးတက်ရောက်သူလည်းယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးများနှစ်ဦးစလုံးအတှကျအညစ်ညမ်းစားသုံးမှုအတွက်အသက်အရွယ်-based တိုးအားနည်းနေခြင်း။ ငယ်ရွယ်လူကြီးသို့မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကိုဖြတ်ပြီးယေဘုယျအားညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုတိုးမြှင့်ပေမယ့်တစ်ဦးဘာသာရေးအသိုင်းအဝိုင်းထဲမှာနှစ်မြှုပ်ခြင်း, ဤတိုးအားနည်းကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ အနာဂတ်သုတေသနလူကြီးကိုဖြတ်ပြီးဖြေဆိုသူအတိုင်းလိုက်နာအဖြစ်စျယာနျဘာသာတရားကို၏နောက်ထပ်ရှုထောင့် (ဥပမာ, ဘာသာရေးယုံကြည်ချက်အမျိုးအစားများသို့မဟုတ်ဆုတောင်းပဌနာ၏ပုံမှန်အလေ့အကျင့်) ဆနျးစစျသငျ့သညျ။
6 လေး: ဇူလိုင်လ 2016,3မှာ 35 အပေါ် Published
ထဲမှာတက္ကသိုလ် Calgary ၏သုတေသီများအားဖြင့်ရေးသားတစ်ဦးကလေ့လာမှုအသစ် Adolescenc ၏ဂျာနယ်အီးမြီးကောင်ပေါက်များ၏ညစ်ညမ်းကြည့်အလေ့အထများကို examine နှင့်သောဘာသာရေးတက်ရောက်သူသိသိသာသာဒေါသထိုကဲ့သို့သောလုပ်ရပ်များသည်လမ်းကဤသို့။
အထူးသဖြင့်အမျိုးသားများအကြား (2003 မှ 2008 များ၏အသက်အရွယ်ကြား) ငယ်ရွယ်လူကြီးသို့မိမိတို့၏ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအပေါ်မြီးကောင်ပေါက်တွေကိုလေ့လာကြည့်ရှုရသော 13 နှင့် 24 အကြားကောက်ယူအဆိုပါလေ့လာမှု, သိသိသာသာအသက်အရွယ်နဲ့ညစ်ညမ်း consumption` တိုးပြသထားတယ်, (အမျိုးသမီးနှင့်အတူအချို့သောတိုးလွန်းလည်းမရှိပေမယ့် ) ။ သို့သော်ညစ်ညမ်းကြည့်ရှုတွင်ဤအသက်အရွယ်-based တိုးဘာသာရေးန်ဆောင်မှုကိုတက်ရောက်ဖို့သူတို့တွင် decidedly ပြောင်ဖြစ်ကြသည်။
ဘာသာရေးဆိုင်ရာလူမှုရေးထိန်းချုပ်မှုသည်ဆယ်ကျော်သက်များအားညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်းကိုအချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှကြည့်ရှုရန်အားပေးသည့်အခါကစားခြင်းတွင်အတားအဆီးတစ်ခုရှိကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ဆုံးဖြတ်နိုင်ခဲ့သည်ဟု Calgary တက္ကသိုလ်စိတ်ပညာဌာနမှပါရဂူဘွဲ့ကျောင်းသား Kyler Rasmussen ကပြောကြားသည်။ “ ဆယ်ကျော်သက်တွေအရွယ်ရောက်လာတာနဲ့အမျှညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲမှုဟာဒီဘာသာရေးဝတ်ပြုဆုတောင်းပွဲတွေမှာတက်ရောက်တဲ့သူတွေကြားမှာအကြီးအကျယ်မကြီးမားဘူး။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မှာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ရှုခြင်းလမ်းကြောင်းကိုပုံဖော်တဲ့နေရာမှာဘာသာရေးတက်ရောက်မှုဟာအချက်တစ်ချက်ဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရတယ်။ ”
ရာစမစ်စန်ကဤသို့ထပ်ဆင့်ဆိုသည် -“ ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်များ၏အပြုအမူကိုအပြုသဘောဖြင့်ပုံသွင်းပေးနိုင်သောကြောင့်၎င်းသည်ဘာသာရေး၏အခန်းကဏ္vကိုသံသယကင်းရှင်းစေသည်ဟုအချို့ကရှုမြင်နိုင်သည်။ ”
ဒီစီမံကိနျးအတှကျစုဆောင်းအဆိုပါဒေတာကိုလူငယ်နှင့်ဘာသာရေးအမျိုးသားလေ့လာမှု, Notre Dame နှင့် Chapel Hill မှာမြောက်ကာရိုလိုင်းနားတက္ကသိုလ်တက္ကသိုလ်မှလူမှုဗေဒပါမောက္ခများကအကွက်ချလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်သုတေသနစီမံကိန်းကိုမှရရှိသောခဲ့သည်။ ဆယ်ကျော်သက်နှင့်၎င်းတို့၏မိဘများစကားပြော 3,290 အင်္ဂလိပ်နှင့်စပိန်၏တစ်ဦးကတစ်နိုင်ငံလုံးကိုယ်စားလှယ်တယ်လီဖုန်းစစ်တမ်းတစ်ခုကိုအမေရိကန်လူငယ်အပေါ်ဘာသာရေးနှင့်ဝိညာဉ်ရေး၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့သည်။
Rasmussen ကဒီလူသိရှင်ကြားမရရှိနိုင်ပါဒေတာများကိုအမှတ်မထင်နှင့်သူ၏အသိပညာရန်, စနစ်တကျမြီးကောင်ပေါက်များ၏ညစ်ညမ်းကြည့်အလေ့အထများအာရုံစိုက်, စူးစမ်းခဲ့ဖူးသောစစ်တမ်းအတွက်တဦးတည်းမေးခွန်းကိုရေးဆွဲခဲ့သည်။ ထိုအချိန်က Rasmussen အဲလက်စ် Bierman, လူမှုဗေဒဦးစီးဌာနများတွင်တွဲဖက်ပါမောက္ခနှင့်အတူလူမှုရေးစာရင်းဇယားအပေါ်တစ်ဦးသင်တန်းတာခံခဲ့ရပါတယ်သူဆယ်ကျော်သက် porn အသုံးပြုမှုအပေါ်ရရှိနိုင်သည့်ဒေတာမှလူမှုရေးစာရင်းဇယားများ၏နည်းစနစ်လျှောက်ထား, လေ့လာမှုအပေါ်သူ၏ Co-စာရေးဆရာဖြစ် Bierman ဟုမေး ။
ဆယ်ကျော်သက်များအကြားညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ရှုခြင်းကိုလေ့လာခြင်းသည်အလွန်အရေးကြီးသည်ဟု Bierman ကဆိုသည်။ ဤအသက်အရွယ်အရွယ်သည်လူတစ် ဦး ၏လူမှုရေးနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အရေးကြီးသောအချိန်ကိုကိုယ်စားပြုသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အရွယ်ရောက်သူများ၌ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲမှု၏ဆိုးကျိုးသက်ရောက်နိုင်မှုအပေါ်ပညာတတ်ထင်မြင်ချက်များကကွဲပြားနိုင်သည်။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ရှိအချို့သောအနီရောင်အလံများကိုမြှင့်တင်ရမည်။
တစ် ဦး ချင်းစီသည်လိင်မှုနှင့်လိင်ဆက်ဆံမှုဆိုင်ရာအကြောင်းများကိုလေ့လာနေသည့်ဘဝ၏ဤအဆင့်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတို့ကို၎င်းအရာများအားထိခိုက်နစ်နာစေမှုနှင့်မှားယွင်းစွာတွေးခေါ်မှုပုံစံများကိုမကြာခဏအားဖြည့်ပေးသည့်အရင်းအမြစ်မှလေ့လာသင်ယူစေလိုပါသလား။ Bierman မေးတယ် "ဒါကမကျန်းမာဘူး။ "
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ရှုခြင်းမှဆယ်ကျော်သက်များအားလမ်းလွဲသွားအောင်ကူညီပေးသည့်ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုများတက်ရောက်ခြင်းကဘာလဲ။ “ ဘာသာရေးအသိုင်းအဝိုင်းမှလူများသည်မျှော်လင့်ထားသည့်အပြုအမူပုံစံများရှိသည်ကိုသိရှိကြသည်။ "ဒါဟာသူတို့ကိုစောင့်ကြည့်သူတစ် ဦး မြင့်မြတ်သောအခြားအယူအဆဖြစ်နိုင်သည်နှင့်လူမှုရေးထောက်ခံမှုအစိတ်အပိုင်းလည်းရှိနိုင်ပါသည်။ အပြာစာပေရုပ်ပုံများကိုမကြာခဏအသုံးပြုပြီးစိတ်ဓာတ်ကျသည့်ကျင့်ဝတ်အသိုင်းအဝိုင်းတွင်သင်ပေါင်းစည်းလိုက်သောအခါ၎င်းသည်အပြာစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုကိုပုံဖော်။ တားဆီးနိုင်သည်။ ကစားပွဲမှာလူမှုရေးထိန်းချုပ်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုရှိတယ်။
Bierman မှဤလေ့လာမှုအတွက်စုဆောင်းထားသောအချက်အလက်များကို ၂၀၀၃ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၈ ခုနှစ်အတွင်းစုဆောင်းခဲ့ပြီးထို အချိန်မှစ၍ ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏လူမှုမီဒီယာနှင့်စမတ်ဖုန်းများလူ့အဖွဲ့အစည်းတွင်ပိုမိုပျံ့နှံ့လာခဲ့သည်ဟုမှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။ “ အရင်ကထက်အွန်လိုင်းမှာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေတွေကိုအခမဲ့ကြည့်ရှုနိုင်တယ်။ “ ဆယ်ကျော်သက်တွေအတွက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေတွေကိုဘယ်လောက်အတိုင်းအတာအထိရနိုင်မလဲဆိုတာကိုငါတို့အလေးမထားဘူး။ ”
ဤသုတေသနသည်ဆယ်ကျော်သက်များအပေါ်ဘာသာရေး၏အပြုသဘောဆောင်သောသြဇာသက်ရောက်မှုအတွက်သက်သေသာဓကဖြစ်သော်လည်းရာမစ်ဆင်သည်လေ့လာမှု၏ရလဒ်သည်၎င်းထက်ကျော်လွန်နိုင်သည်ဟုခံစားရသည်။ “ ဆယ်ကျော်သက်တွေကိုညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံတွေကနေကင်းဝေးစေတဲ့ဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာတွေလဲဆိုတာကိုစမ်းကြည့်ဖို့အရေးကြီးတယ်ထင်တယ်။ “ ဒါကိုတွက်ကြည့်ပြီးဘာသာရေးနောက်ခံအပြင်ဘက်မှာသုံးမယ်ဆိုတာကြည့်ရအောင်။ ရှင်းနေသည်မှာဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းသောသူများသည်၎င်းတို့၏ကလေးများအားညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများကြည့်ရှုခြင်းနှင့်၎င်းကိုလွှမ်းမိုးစေလိုခြင်းမရှိသေးသောသူများရှိသည်။ ဒါကြောင့်ငါတို့ကအလုပ်လုပ်နေတဲ့ဘာသာရေးအသွင်အပြင်တွေကိုမိသားစုလိုက်ဒါမှမဟုတ်လောကရဲ့နေရာမှာအသုံးချမယ်ဆိုရင်တကယ်အကျိုးရှိမှာပဲ။ ”